Alohan'ny hampidirana votoatiny eto amin'i Wikipedia dia mila fantarina tsara tsy mifanohitra amin'ny lisansa ampiasaina eto ny lisansan'ilay lahatsoratra. Raha mampiasa ny votoatin'i Wikipedia ianao dia tsy maintsy manao izany araka ny fepetra napetraky ny lisansa miasa eto.
Rehefa mandefa lahatsoratra eto amin'i Wikipedia ianao tonga dia mitondra avy hatrany ny lisansa CC-By-SA 3.0 mandrakariva ilay lahatsoratra navoakanao.
Ny tanjon'ny Wikipedia dia ny hamorona loharanom-pahaizana amin'ny alalan'ny raki-pahalalana. Ity famoahana ity dia tsy maintsy atao amim-panajana ireo fepetra ara-dalàna ary indrindra ny fanajana ny zon'ny mpamorona; antoka lehibe izany mba hijanonan'ny asantsika eto sady ho voaaro amin'ny loza ara-dalàna ary sady mifanaraka amin'ny fikasany ho "raki-pahalalana malalaka".
1 Ny satan'i Wikipedia momba ny zom-pamorona
2 Manampy lahatsoratra
2.1 Ianao no nanoratra
2.2 Tsy ianao no nanoratra
Ny satan'i Wikipedia momba ny zom-pamoronaHanova
Mitondra ny fahazoan-dalana (lisansa) Free Documentation License (FDL) ary ny Creative Commons Share-Alike (CC-BY-SA) avokoa ny lahatsoratra eto amin'i Wikipedia. Izany hoe: afaka ampiasana am-pahalalàna ary mandrakizay ny votoatiny, araka ny fahazoton'ny mpikambana.
Ireo lisansa roa ireo dia manome fahafahana toa izao:
Mampiasa am-pahalalahana ny votoatin'i Wikipedia, araka ny fitsipika ny lisansa GNU-FDL sy ny CC-by-SA 3.0
Mandika ary mizarazara na ny votoatiny iray manontolo na amin'ny ampahany, na maimaimpoana na atao takalom-bola
Manova ary mizara
Ny fepetra tokony hajaina dia:
Manambara ny tompony na lisitry ny tompony
Mizara amin'ny lisansa mitovy.
Tsy maintsy manaja ny fepetra mifehy ny zom-pamorona ny zavatra hosoratana eto ary tsy maintsy manaja ihany koa ny fepetra nampetraky ny GFDL ary ny CC-BY-SA.
Afa ny toeranao raha ianao no nanao an'ilay lahatsoratra na nodikainao ilay izy.
Ianao no nanoratraHanova
Ny fandraisanao anjara eto amin'ny tetikasa dia tsy tokony hifanohitra amin'ny fifanarahana nataonao tamina mpamokatra hainoamanjery hafa.
Amin'ny fandraisana anjara amin'ity tranokala ity dia ampitandremana ianao amin'ny fotoana samihafa fa rehefa mandefa lahatsoratra ianao, na avy aiza na avy aiza niaviany, dia hiharan'ny lisansa voalaza etsy ambony ilay soratra. Noho izany ianao dia tsy afaka hanohitra amin'ny anaran'ny zom-pamorona ny fampiasana azy intsony na inona na inona tanjony.
Mitahiry ny zonao amin'ny asanao ianao, ary indrindra azonao atao ny mamoaka azy io amin'ny alàlan'ny lisansa tadiavinao. Na izany aza, dia tsy ho azonao atao ny manafoana ny lisansa avy amin'ireo kinova napetrakao teto: izay kinova nataonao teto dia hitazona ny lisansa Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Licence (CC-BY-SA 3.0) ary ny GNU Free Documentation Licence. (GFDL) mandrakizay.
Tsy ianao no nanoratraHanova
Nahita ilay votoatiny ianao ka efa maty efa ela (mihoatra ny 70 taona) ny tompony: ilaina fotsiny ny manondro an'ity loharanom-baovao ity ho fanamarinana.
Jereo raha mitondra ny lisansa CC-BY-SA 3.0 ilay soratra. Raha toa ka marina izany dia azonao ampiasaina eto ilay lahatsoratra, fa mila rohy mankany amin'ny lahatsoratra niaviana. Tsy maintsy atao ihany koa izany rehefa mandika teny.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Copyrights&oldid=1038961"
Dernière modification le 14 Oktobra 2021, à 21:36
Voaova farany tamin'ny 14 Oktobra 2021 amin'ny 21:36 ity pejy ity.